Polisy Rosiana, Very Fomba Iray Tsotra Hamandrihana ireo Mahery Fihetsika Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Polisy Rosiana, Very Fomba Iray Tsotra Hamandrihana ireo Mahery Fihetsika Amin'ny Aterineto
Voadika ny 01 Febroary 2017 1:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, English, Español, Français, čeština , English
Sary avy amin'i Kevin Rothrock
Nandritra ny taona maro, nitodika tany amin'ny Vkontakte ny polisy Rosiana, ilay tambajotra sosialy malaza indrindra ao amin'ny firenena, hahazoana mora ireo mety ahiahiana ho mpanao heloka bevava. Asa sarotra sady mampidi-doza ny fihazàna mpangalatra sy mpamono olona, noho izany dia tsy tokony hahagaga raha mitohy manenjika ireo ” mahery fihetsiky ny aterineto” ireo mpanadihadin'ny fanjakana izay miezaka manaja ny isa tratrarina amin'io tranga io.
Ankoatra ny tahirin-kevitra lehibe mirakitra ireo mpampiasa, niantso ny polisy Rosiana ny Vkontakte satria manaraka tsy tapaka ny fangatahana ataon'ireo sampandraharaha miandraikitra ny fampiharana ny lalàna momba ny hoe iza sy ny toerana misy ny mpampiasa tsirairay ilay tambajotra – tahirin-kevitra manandanja hitondràna fiampangana ho an'ny olona noho ny fizaràna votoaty heverina ho tsy ara-dalàna ety anaty serasera.
Raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny fomba nampiasàn'ny polisy Rosiana ny haino aman-jery sosialy mba hikirakiràna ireo antontan'isa momba ny heloka bevava voavaha, jereo ny fandikan'ny RuNet Echo ny tatitra manokana navoakan'ny tranonkala MediaZona, herintaona lasa izay.
Tamin'ny Talata 24 Janoary, raha nanitsy ny iray amin'ireo tefiny momba ny fiainana manokana, nampihena be ny isan'ny sary nozaraina ho azon'y rehetra jerena hita tany anaty pejy manokana ny Vkontakte, araka ny tranonkalam-baovao TJournal. Mihatra amin'ireo sary “notehirizina” ilay fiovàna, fitaovana iray atolotra ao amin'ny Vkontakte izay manome alalana ny mpampiasa mba hanamarika ireo sary nozaraina tamin'ny hafa. Hatramin'ny Talata, izay zavatra rehetra “tehirizin'”ny olona iray dia miampy any amin'ny tahirin-tsary izay afaka hitan'ny rehetra — mampiseho an'ireo mpampiasa maro amin'ny fomba izay tsy mbola tao an-tsain'izy ireo.
Ny politika vaovaon'ny Vkontakte dia manafina ireny tahirin-tsarin'ny olona rehetra ireny afa-tsy ireo mpampiasa izay mamorona izany. Mbola afaka mizara ireo tahirin-tsariny “notehirizina” ny olona tsirairay raha iverenan'izy ireo ny mombamomba ny fiainany manokana.
Raha heverinao fa toa tsy misy dikany izany fiovana izany, makà kevitra amin'i Evgeny Kort, ilay lehilahy 20 taona avy any Maosko, nampangaina ho mahery fihetsika tamin'ny Novambra, ary voaheloka herintaona an-tranomaizina. Soa ihany ho an'i Kort, taty aoriana dia nahenan’ny fitsarana iray mpandrava didy ho lamandy 200.000 robla (eo amin'ny 3400 dolara) ny saziny, saingy mbola sazy henjana io, raha heverina ny hoe ny heloka bevava nataon'i Kort dia noho izy “nitahiry” sariitatra mampiseho an'i Maxim” Hatcher “Forward Martsinkevich, ilay Rosiana Nasionalista mamely an'i Alexander Pushkin, ilay poety malaza sady efa nodimandry efa ela.
Nilaza i Kort fa tsy nihevitra velively ny hanaparitaka ilay sary, nefa naseho ho an'ny daholobe tany amin'ireo tahirin-tsariny “voatahiry” ao amin'ny Vkontakte izany, izay adikan'ny rafi-pitsarana any Rosia ho porofo fa tena nikasa hanaparitaka kabary feno fankahalana voaràran'ny lalàna izy.
Mety hisy fiantraikany any Belarosia izay ahitana mpampiasa tambajotra an'arivony koa ilay tefy momba ny fiainana manokana ao amin'ny Vkontakte. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity (Janoary), vehivavy iray any Belarosia no voasazy satria nizara boky sy sary vetaveta, satria “nitahiry” sary iray maneho olona roa manao firaisana ara-nofo izy. Nilaza ilay vehivavy, Diana Selvanova, fa tsy tamim-pieritreretana no “nahatahizaniry” ilay sary, raha nampiasa fitaovana tamin'ny finday, ary tsy tena nahita akory aza fa mampiseho filahianà lehilahy ilay izy.
Ho an'ny heloka bevava vitany, nahazo sazy mihantona roa taona i Selvanova, nefa tsy izay no tena ratsy indrindra; voaroaka tamin'ny asany koa izy ary nampitandrina ny fianakaviany ny sampan-draharaha miaro ny ankizy ao an-toerana no sady nandrahona ny hàka ny zanany lahy enina taona.
Na nanitsy ny tefy momba ny fiainana manokana amin'ny tahirin-tsary “voatahiry” aza ny Vkontakte herintaona lasa izay, dia inoana fa tsy hahita, ary koa tsy hahenjika velively olona toa an'i Evgeny Kort sy Diana Selvanova ny mpitandro filaminana.